Russia ayinayo umuntu onjalo, ongeyena ujwayelene nomsebenzi Ili Rahmielevicha Reznika. Lokhu wengoma edume kulethe izwe nge eziningi zalezi hits, ukuthi wayemthanda kuze kube yilolu suku.
Ngokusho yomlando wakhe, u-Ilya Reznik Ngeza kuleli zwe eLeningrad, njengoba kwenzeka ngo-1938. Abazali bakhe babedabuka evela eDenmark. Ebuntwaneni yombhali weculo esizayo neze kuyothiwa bayajabula. Isiphelo sakhe wayemiselwe ukuba usinde ukuvinjelwa ke esiphuthumayo Urals, ukufa ekuseni kayise. Cishe ngaso leso sikhathi ngemva kokubuya unina ka-Eliya bashada wangena beyofuna ukuphila okungcono e Riga, kokushiya abazali bakhe uyise, ngubani bakwamukela kamuva umfana.
Naphezu kwalokho, njengoba kusho biography, u-Ilya Reznik wakhula nelukuluku futhi abanamakhono. Wayelethwa wahlanganyela yokuzijwayeza kanye ballroom ukudansa, ngaba khona ngisho nasemhlanganweni umbuthano nosaziwayo abasha. Ngemva kokuqeda esikoleni, le nsizwa yaba umsebenzi yaseshashalazini, kodwa kulo ngogesi. Ngo parallel, wayengumuntu umsizi ku esikoleni sezokwelapha. Kuphela ukuzama 4th Ilya wakwazi zijoyine abafundi Leningrad State Isikhungo Theatre, umculo Cinema. Lokhu kwenzeka ngo-1958.
Yayiyini umsebenzi wakhe?
Ngokusho biography, ngenkuthalo Ilya Reznik uye wakhuthaza ethiyetha Komissarzhevskaya, kodwa namanje isikhathi esiningi yayizimisele izinkondlo. Ingoma owanikhipha kuye udumo kakhulu, wabizwa ngokuthi "Cinderella," futhi reprized wakhe ULyudmila Senchina. Ngemva kwalokho Reznik isidlulile ubudlelwano bayo yemidlalo futhi njengoba ilungu Leningrad Union of Abalobi, baqhubeka ngentshiseko ukubhala izinkondlo. Akuwona wonke umuntu uyazi ukuthi Ilya Rahmielevich ezikhishwe amaqoqo eziningana izinkondlo zezingane, phakathi kwabo "zwe elincane", "Kukushechka" nabanye. Ngo-1999, wengoma waba ilungu eMoscow Union of Abalobi. Ngemva konyaka afike wasungula khona iSikhungo sokushicilela indlu. Nobani wabambisana Ilya Reznik? Biography ithi kakhulu ngenkuthalo - ne Ingxubevange Pugachevoy. ukusebenzisana babo baqala emuva ngo-1979. Ngaphezu kwalokho, izingoma zakhe kanye sung saseLyme Vajkule, uNatasha koroleva nezinye abaculi abaningi kabani usebenza Ili Reznika akhazinyuliswe.
Kungakhathaliseki Ilya Reznik enhle? Izithombe uqinisekise ukuthi - ngempela indoda ezithakazelisayo. Futhi yakhe yokuphila siqu ungaphakathi ngetetsamelilwati abalandeli eziningi imibuzo izingxabano. Lisitshela biography Ilya Reznik kushada Regina Resnick, ngubani lomqondisi we Okunhlobonhlobo Theatre. Kulesi umshado azalelwa izingane ezimbili: indodana owaba intatheli owaziwa nendodakazi. unkosikazi wesibili kwaba umdansi Munir Argumbaeva. Futhi wazala indodana. Emhlabeni kowezi-2000, umbhangqwana waphula ngokwethukela futhi Munira nendodana wakubo wathuthela e-United States. Zokwehlukanisa, nokuyinto eyaphela ngo-2012, kwaba ngempela impikiswano. Ilya Reznik (yomlando wakhe kuqinisekisa lokhu) kweminyaka engu-74 eshadile futhi okwesithathu - ukuze Irina Romanova. Uthando lweqiniso kungafika noma ubudala.
Life wengoma kwaba ngempela ezithakazelisayo, futhi sibonga kuye ukuthi izwe wezwa eningi umculo emangalisayo. abalandeli yakhe ngethemba ngobuqotho ukuthi izoqhubeka yenza iminyaka eminingi, ngakho imbongi ufisa impilo namandla ngokwengeziwe.
Isikhova i-great Russian imbongi Baratynskiy evgeniy Abramovich: Biography, lokusungula
Nekrasov, umjikelezo "Panaevskom": uhlu nezinkondlo uthando, ukuhlaziywa, izici
Imbongi uPawulu Vasilyev: Biography, izithombe
Yevgeny Bazarov - hero of the izici inoveli
Mikhail Sholokhov, "imbewu Shibalkovo": isifinyezo sezinto indaba